Achọtara m Jeans kacha mma maka ụmụ nwanyị curvy mgbe ọtụtụ afọ nke nkụda mmụọ gasịrị - Ụdị
Achọtara m Jeans kacha mma maka ụmụ nwanyị curvy mgbe ọtụtụ afọ nke nkụda mmụọ gasịrị
N'ihi na onye ọ bụla kwesịrị inwe ụzọ zuru oke.
Enwere m nsogbu mgbe niile ịchọta jeans dabara adaba. Ọbụlagodi site na nwata-mgbe m dị gịrịgịrị ma nọrọ na klaasị ugboro anọ n'izu-ọtị m mere ka o siere m ike ịbanye na uwe ogologo ọkpa, ọkachasị n'ihi na etolitere m n'oge obere jeans. Ka ahụ m juputara karịa ka oge na -aga, m wee buo ibu, ọ bịara doo m anya na ọtụtụ ụdị denim ndị a ma ama emeghị jeans maka ahụ dị ka nke m. Otu a ka m siri malite njem m ichọta jeans kacha mma maka ụmụ nwanyị curvy.
Chee echiche, site na nha nha, ọkọlọtọ m dabara na ngalaba 'ogologo-nha' (na-emegide nha) n'ihi na m na-agbanwe n'etiti 12 na 14, ma ọ bụ 31 na 32. Mana n'ihi na isi m dị n'akụkụ nke ka ukwuu , ogologo ogologo anaghị arụkarị ọrụ na m. M ga -agbarịrị ogo ka m wee kpuchie ha n'úkwù m ka apata ụkwụ m ghara ịdị ka ọ na -ekegharị ha gburugburu - mana mgbe ahụ, m ga -ejedebe na elu ya buru oke ibu. Anọ m na -alụ ọgụ mgbe niile na oghere dị n'úkwù nke yiri ka ọ na -edoghị anya, ọ bụrụgodi na ha dabara nke ọma, ha ga -ekewa n'ụzọ na -adịghị mma n'apata ụkwụ m n'ihi na ha na -etekọ ọnụ ma na -agbada. N'ime ọtụtụ afọ - na ọtụtụ mgbanwe dị arọ nke kpaliri m ịnwale ụdị denim a na -apụghị ịgụta ọnụ - abịaruru m n'ịkwụsị ịhụ mgbe ọ bụla m ga -achọta otu ụzọ jeans zuru oke. Ekwenyesiri m ike na m ga -ebi ndụ dị ka uwe na uwe mwụda ruo mgbe ebighị ebi.
gịnị ka ọ pụtara mgbe ị nrọ banyere ọnwụ
Mgbe ahụ achọtara m DL1961 . Agaghị m anụ maka ya, n'agbanyeghị na ika ahụ dị n'okpuru imi m na Nordstrom , Ụlọ ahịa , na Amazon . Achọpụtara m nke mbụ site na mmekorita ya na onye na -emetụta ịma mma Marianna Hewitt kwuru ma nwee ohere ịnwale Hepburn Oke-Rise Wide-Leg ụzọ abụọ. Ikwu na ụwa m gbanwere ruo mgbe ebighi ebi agaghị abụ okwu ekwesighi.
Amaghị m na jeans nwere ike ịdị mma nke ukwuu, mana ọ ka na -ele anya dị egwu ma na -atọ ụtọ. Akwa ukwu dị mma n'ezie na -abịa gafere bọtịnụ afọ m - ihe na -efu n'ụdị ọ bụla ọzọ m nwara site n'ụdị dị iche iche - na akwa ahụ nwere ihe zuru oke nyere m ohere ịnọdụ ala nke ọma na -enweghị eriri eriri na -egwu ala n'ime afọ m. Ma akụkụ kacha mma? Enweghị oghere n'úkwù na nnukwu ihe nkwata m na -ele anya dị ịtụnanya n'ime ha, ọ bụrụ na m kwuo otu a n'onwe m. Otu akwa jeans a abụrụla ụkpụrụ ọla edo m maka denim, ha kwenyekwara m ka m nwaa denim ọzọ.
N'eziokwu, mgbe m chọpụtachara ihe m chere na ọ bụ zuru oke otu uwe ogologo ọkpa, enwere m ụjọ na ọ na -efu efu na ihe ndị ọzọ dabara na ika ahụ agaghị eto m nke ọma dịka Hepburn mere. Obi dị m ụtọ na DL1961 gosipụtara na m mejọrọ, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu ịhụ na ika ahụ na -enye ngụkọta nha ma na saịtị ya na site na ndị ọzọ na -ere ahịa.
Agbanyeghị na anyị niile rapaara n'ime maka ọdịnihu a na -atụ anya, etinyela m ụzọ abụọ ọzọ na Hepburn na Farrow ụdị ka m nwee ike nwee ọmarịcha ịpụta site na kwarantaini maka brunch al fresco mbụ m n'ime ọnwa.
DL1961 x Marianna Hewitt Farrow Ubi Akpụkpọ ahụ Skinny Jeans dị na Stockton
$ 199 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
DL1961 Farrow Ankle nwere ọmarịcha jeans na Equinox
$ 178 Verishop Zụta ugbu a
DL1961 Hepburn Jeans nwere ụkwụ dị elu na Palermo
DL1961 Bridget Jeans-Cut Jeans dị elu na Hermosa
$ 209 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
DL1961 Jeans kwụ ọtọ kwụ ọtọ na Afton
$ 219 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
DL1961 Mara Ankle Ụkwụ dị elu kwụ ọtọ na Meringue
$ 189 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Ebe ọ bụ na DL1961 jeans batara na ndụ m, enwere m ohere ịchọta ụdị ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ maka ahụ m nke na-adịchaghị oke, nke nwere ube. Site n'ọchụchọ m, ahụla m ụdị aka ndị ọzọ nwere akwa jeans maka ụmụ nwanyị na -achọ mma, gụnyere nke Khloé Kardashian. Ezigbo onye America , Madewell , Abercrombie , na Ndị Livaị . (Ngosipụta zuru oke: Achọpụtabeghị m ụzọ Levi nke na -arụ ọrụ nke ọma na m, mana enwere m ọtụtụ ndị enyi na -agbagharị agbagharị na -eji Wedgie Fit na -a swearụ iyi.)
ihe ị ga -eme mgbe mmiri na -ezo
Ọ bụrụ na m nwere ike ịnye ụmụ nwanyị ndị ọzọ na -achọgharị okwu amamihe ọ bụla nke na -achụ nta akwa jeans zuru oke, adala mbà. Site na ndọpụ mmekọrịta mmadụ na -aga n'ihu, ugbu a bụ oge kachasị mma iji nwalee ụzọ abụọ na nkasi obi nke ụlọ gị - ọ nweghị onye na -eme ọsọ ọsọ, ị ga -ahụ n'ezie etu uwe mwụda jeans na akwa uwe gị ndị ọzọ siri dị. Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adaa, zụta otu ụzọ na DL1961. Ha ga -aba uru itinye ego, a na m ekwe nkwa.
Kristin Corpuz bụ onye edemede na -enye aka na Ọmarịcha. Soro ya @nwanyi_ocha .
esi ehichapụ mgbanaka njikọ aka na ụlọ
otu esi eme ka uto gị too ngwa ngwa
cbd mmanụ maka wrinkles tupu mgbe
ogologo oge ka thread ga -adịru